बेलायत छोडेर फुल खेतीमा रम्दै युवा, यति छ दैनिक कमाई(भिडियोसहित) « OSBreak
बेलायत छोडेर फुल खेतीमा रम्दै युवा, यति छ दैनिक कमाई(भिडियोसहित)
भक्तपुर। नेपालमा धेरै नर्सरीहरु छन्, जहाँ विभिन्न जातका फुल तथा विरुवाहरु उपलब्ध हुने गर्छन् । सबैको शैली पुरानै छ तर यत्तिखेर राजधानीमै नयाँ ढंगबाट ‘आइ एम द गार्डेनर’ नाम दिएर नयाँ सुरुवात भएको छ ।अध्ययनको लागि बेलायत पुगेका विराज खड्का स्वदेशमै केही गर्ने अभिलासा बोकेर फर्केपछि धेरै क्षेत्रमा हात हाले तर उनी अरु व्यवसायमा सफल हुन सकेनन् । अन्ततः उनी नयाँ तरिकाबाट नर्सरी व्यवसाय गर्नतिर लागे, अहिले उनी सफल छन् अनि सन्तुष्ट पनि छन् ।
काठमाडौँ धुम्बाराही स्थित ‘आई एम द गार्डेनर’ – फूल–बिरुवा पाइने नर्सरी हो यो । अन्य नर्सरीभन्दा भिन्न छ। नाम पनि, काम पनि। यो नाम नर्सरीलाई मात्र लक्षित गरी राखिएको होइन। बिरूवा लगेर रोप्ने हरेक मान्छे माली हुन सक्छन् भन्ने सन्देश पनि हो।
नर्सरी भन्दा पनि फूल–बिरुवाको ‘शोरुम’ जस्तो देखिने ‘आई एम द गार्डेनर’ मा बिरूवा सिधै लगेर कोठामा राख्ने खालका हुन्छन्। सुन्दर गमलासहित ।हामीकहाँ फूल-बिरूवा नर्सरी त धेरै छन्। तयारी गमला-बिरूवा व्यवसाय भने विस्तारै फाट्टफुट्ट देखिन थालेको छ। ‘आई एम त गार्डेनर’ यसको शोरूम नै भएको विराज बताउँछन्।
‘विदेशमा यस्तो गार्डेनिङ सेवा लोकप्रिय छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने यति ठूलो स्केलमा गर्ने हामी पहिलो हौं। हामी ग्राहकलाई तत्कालै बगैंचा तयार गर्न सकिने गरी फूल–बिरुवा उपलब्ध गराउँछौं।’सुरूमा उनीले अनलाइनमार्फत् बिरूवा बेच्थे। माग बढ्दै गएपछि ग्राहकको सुविधानिम्ति भाटभटेनी, सेलवेजजस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आउटलेट खोलेका छन्।‘काठमाडौंमा नर्सरी त जति पनि छन्। पाँच सयजति त दर्तै छन्। तीभन्दा फरक गर्न सकिन्छ कि भनेर यतातिर ध्यान दिएँ,’ उनले भने।
बगैंचा बनाउन धेरै ठाउँ वा जमिन चाहिन्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकिनेमा उनी विश्वस्त छन्।‘त्यसैले हामी इन्डोर प्लान्ट (कोठामै हुर्कन सक्ने बिरूवा) मा केन्द्रित छौं। यिनलाई कोठाभित्रै राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कोठा लिएर बस्नेहरूले पनि सानो बगैंचाको आनन्द लिन सक्नेछन्।’
‘इन्डोर प्लान्ट मात्रैको शोरुम खोलेर यसरी व्यापार गर्ने हामी पहिलो हौं,’ उनी थप्छन् ,‘ग्राहकले लैजाने फूल–बिरुवाको स्याहारसुसार तरिकाबारे पनि आवश्यक जानकारी दिन्छौं।’इन्डोर बिरूवाहरू पनि घरको ठाउँअनुसार फरक-फरक हुने उनी बताउँछन्। भान्सा, सुत्ने कोठा, बाथरुम, लिभिङ रुममा राख्न छुट्टाछुट्टै प्रजातिका छन्।‘काठमाडौंमा प्रदूषण बढेको छ। मर्निङ वाकमा निस्कनसमेत कठिन भइसक्यो,’ उनले ती बिरूवाका फाइदा बुझाउँदै भने, ‘घरभित्रै विभिन्न बिरूवा रोपेर अक्सिजन लिन सकिन्छ। हावा शुद्ध बनाउन सकिन्छ।’
आई एम द गार्डेनरमा २ सयदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्मका फूल–बिरुवा पाइन्छन्। स्थापित हुने क्रममा भएकाले नाफाभन्दा पनि ग्राहकलाई आफ्नो ब्रान्ड चिनाउन लागिपरेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै यो ठाउँ एक बगैंचा मात्र होइन। सुन्दर बिरूवाकाबीचमा कुर्सी-टेबलहरू छन् जहाँ बसेर प्रकृतिको अनुभव पनि गर्न सकिन्छ।
गमलामा तयारी बिरूवा स्याहार्न पनि सजिलो हुने उनी बताउँछन्। ‘फूल–बिरुवाको रहर भए पनि रोप्नेदेखि हुर्काउने र स्याहारसम्मका झमेलाले कतिपयले समय र जाँगर निकाल्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तै खाले ग्राहकका लागि हामी छौं।’
घरका साथै रेस्टुरेन्ट, होटल, पार्टी, सेमिनार लगायत ठाउँमा पनि छोटो समयमा फूल–बिरुवा सजाउन यो प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।आई एम द गार्डेनरले यी बिरूवाहरू पहिले प्लाष्टिकका झोलामा उमार्छ। जसका लागि छुट्टै ठाउँमा अर्को नर्सरी छ। फुलिसकेपछि गमलासहित यहाँ ल्याएर उपलब्ध गराउँछ। यसका साथै स्थानीयस्तरबाट पनि बीऊ तथा सरसामान उनीहरूले ल्याउँछन्। पछि नेदरल्यान्ड्सबाट फूल–बिरुवा आयात गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए। नेदरल्यान्ड्स व्यावसायिक फूल खेतीका लागि विश्वमै चर्चित छ।
‘यहाँबाट बिरूवा लगेर सिधै सजाउन सकिन्छ। जुन बिरुवालाई जत्रो आकार दिने हो, त्यसलाई त्यत्रै गमलामा सेट गर्छौं। बिरुवा पनि त्यहीअनुसार हुर्कन्छ। यसलाई पछि अर्को भाँडोमा सार्ने झन्झट हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमित हेरविचार र गमला सरसफाइ र रङरोगनको झन्झट पनि पर्दैन।’सहज र हलुका हुनाले ग्राहकले पनि प्लाष्टिककै गमला खोज्ने गरेको उनले बताए। यी गमला पुनर्प्रयोग गर्न मिल्ने ‘युपिभिसी’बाट बनेका उनले जानकारी दिए। प्लाष्टिक विकल्पमा सेरामिक प्रयोग गर्ने सोचमा उनी छन्।
‘अहिले गमला भारत र चीनबाट आउँछ। विस्तारै नेपालमै बन्ने सेरामिक प्रयोग गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने।आइ एम द गार्डेनरमा पाइने गमलासहितका यी फूल–बिरुवामा माटो हुँदैन। ७० प्रतिशत कम्पोस्ट मल र ३० प्रतिशत कोकोपिट (नरिवलको जटाको मसिनो धूलो जो माटोझैं देखिन्छ) हुन्छ। यसले गमला अन्यभन्दा यसै हलुका हुन्छ। यताउता सार्न सजिलो हुनका साथै दिनकै पानी हाल्ने झमेला हुँदैन। कोकोपिटमा पानी धेरै सोसिने भएकाले धेरै दिनसम्म बाहिर जानुपरे पनि बिरूवा नसुक्ने उनी बताउँछन्।
‘हामीले तयार गरेको गमलामा खनिजजस्ता आवश्यक तत्व पहिल्यै हालेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘बोट सुक्दैन पनि। कोकोपिटले वातावरणमा पनि फाइदा गर्छ। विदेशमा पनि माटो प्रयोग गर्न छोडिसकिएको छ।’
इन्डोर, मौसमी लगायत तयारी अवस्थाका सेलाजिनेला, साइक्लामेन, गुलाब, बेम्बो पाम, फोनिक्स पाम, लण्डन डम्पी, स्नेक प्लान्ट, साल्भिया, बिग पेन्सी, बटम रोज लगायत प्रकारका फूल–बिरुवा यहाँ पाइन्छ।प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय सामान आफूले उपलब्ध गराउने दावी उनको छ। यस्ता बिरुवा विह, व्रतबन्ध, जन्मदिन, वार्षिकोत्सव जस्ता अवसरमा उपहार दिने चलन बढिरहेको उनी बताउँछन्।
‘सामान वा बुके दिनुभन्दा गमलासहितको फूल दिन सुझाउँछौं हामी। किनकि यो सुन्दर, स्वस्थ्य र ताजा रहिरहन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी उपहार दिन हामीले फूल–बिरुवाको प्याकेजिङमा पनि ध्यान दिएका छौं।’बाँकी हेर्नुहोस् भिडियोमा :
जहाँ इच्छा त्यहा उपाय, ५५ वर्षिया करोडपति गोमा पराजुली ५ कक्षा पढ्दै
पोखरा । भनिन्छ नि जहाँ इच्छा त्यहा उपाय । सँगै नेपाली अर्को उखान पनि छ
भैसीलाई पनि छोडेनन्, मोरङमा भैसीमाथि बलत्कार गर्ने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा !
जनावरभन्दा मानिस अविवेकी र हिंस्रक बन्न थालेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण मोरङमा घटेको घटनालाई
निलमणी भण्डारीको दोहोरी एल्बम “म चिन्दिन भने” बजारमा ! रुवाउने छ यो मार्मिक भिडियोले !
आफ्नै होटलमा बसेका भारतीयले गरे अपहरण, गुडिरहेको गाडीको ढोकाबाट फाल्दिए, शालिग्रामले भने – ठुलो कालले बाँचे
पोखराको पृथ्वीचोकस्थित होटल निलकमलका सञ्चालक शालिग्राम पौडेलको अपहरणमा परेको केही समयमै उद्धार भएको छ ।